Idatha Big yonke indawo, kodwa besebenzisa khona kanye nezinye izinhlobo idatha elibukelayo ucwaningo social kunzima. Ngolwazi lwami kukhona into efana no khulula kwasemini impahla ucwaningo: uma ungenawo efakwa omningi ukuqoqa idatha, khona-ke cishe Kuzofanele efakwa omningi ehlaziya idatha yakho noma ukucabanga mayelana kuyini in umbuzo othakazelisayo ukuba acele idatha. Ngokusekelwe emibonweni kulesi sahluko, ngicabanga ukuthi kukhona izindlela ezintathu eziyinhloko big imithombo kwemininingwane yocwaningo kuzoba ngokusemthethweni labaluleke kakhulu ucwaningo social yilezi:
empirically adjudicating phakathi ukuncintisana izibikezelo theory. Izibonelo zalokhu hlobo lomsebenzi zihlanganisa Farber (2015) (New York Taxi abashayeli) kanye King, Pan, and Roberts (2013) (Imingcele e China)
nesilinganiso okuthuthukisiwe social kwenqubomgomo ngokusebenzisa nowcasting. Isibonelo salolu hlobo lomsebenzi Ginsberg et al. (2009) (i-Google Flu Amathrendi).
kulinganiswa imiphumela esiyimbangela ngokuhlolwa yemvelo kanye elihamelanayo. Izibonelo zalokhu hlobo lomsebenzi. Mas and Moretti (2009) (silunguze imiphumela lokukhiqiza) kanye Einav et al. (2015) (umphumela we starting intengo indali at eBay).
imibuzo eminingi ebalulekile e ucwaningo social lungase lubonakale njengoba omunye kulaba abathathu. Nokho, kulezi zindlela ngokuvamile zidinga abacwaningi ukuba alethe okuningi idatha. Yini eyenza Farber (2015) ezithakazelisayo ugqozi theory for nesilinganiso. Lokhu ugqozi theory livela ngaphandle idatha. Ngakho, kulabo zinhle at becela nezinhlobo ezithile imibuzo yocwaningo, big imithombo idatha tingaba nemphumela lomuhle kakhulu.
Ekugcineni, kunokuba zibhalwe ngenkolelo yokuziphendukela enophephela yocwaningo enokwehla (ekade kungumbuzo kusukela focus on salesi sahluko), singakwazi flip script futhi adale theorizing empirically enophephela. Lokho, ngokusebenzisa ekuqongeleleni ngokucophelela of amaqiniso enokwehla, amaphethini, kanye puzzle, singakha eyeza nezazi zezinkanyezi ezikhuluma entsha.
Lokhu ehlukile, idatha-kuqala approach to ithiyori akukusha, futhi bekubonakala ngamandla kunabo bonke okushiwo ngu Glaser and Strauss (1967) nge call lwabo theory lusekelwe. Le ndlela idatha-lokuqala, Nokho, akusho ukuthi "ukuphela theory," njengoba imangalelwe ingxenye enkulu journalism azungeze ucwaningo kule age digital (Anderson 2008) . Kunalokho, njengoba izinguquko idatha imvelo, kumelwe sikulindele kabusha sekulinganisa ubuhlobo phakathi theory kanye nedatha. Ezweni lapho iqoqo idatha kwakubiza, kunengqondo kuphela ukuqoqa idatha ukuthi imibono basikisela kuyoba wusizo kakhulu. Kodwa, ezweni lapho umzukuzuku idatha kakade ayatholakala mahhala, kunengqondo futhi zama indlela imininingwane lokuqala (Goldberg 2015) .
Njengoba ngiye kuboniswe kulesi sahluko, abacwaningi bangafunda okuningi ngokubheka abantu. In the Izahluko ezintathu ezilandelayo, mina ngizobe ichaze ukuthi singayiqonda kanjani ukufunda izinto eziningi futhi ezahlukene uma senza ente yethu iqoqo idatha bese uxhumana nabantu ngqo ngokubuza imibuzo (Isahluko 3), egijima kwenziwa ucwaningo (Isahluko 4), ngisho ehilela bona ku locwaningo ngqo (Isahluko 5).